Maxaad kala socotaa xaafadda DAAMI ee Hargaysa ku taala iyo booqashadii Ilhaan Faleebo | Salaan Media
Home Wararka Maxaad kala socotaa xaafadda DAAMI ee Hargaysa ku taala iyo booqashadii Ilhaan...
Maxaad kala socotaa xaafadda DAAMI ee Hargaysa ku taala iyo booqashadii Ilhaan Faleebo
Booqashadii iyo wacyi Galintii Caruurta Xaafada DAAMI ee Hargiesa ,Waa runtii Mucjisooyinka ay caruurtan yar yar leeyihin ayaa ah kuwo dad- doodu iyo maskooxda ay kala wayn yihiin waxan la kulmay caruur 5 jir ilaa 6 jir ah oo hadanaa xafidsan Magacayadaa ALLAH.
Waxa muhiim ah in Caruurta noocaasoo kale ah aad loo ilaaliyo, Waa dad aan wax ay haystaan Jirin ee dhibaato badan qaban. Waa Xaafadda Daami oo ay ku nool yihiin caruur aad u yar-yar hadana Illahay u dhameeyey aqoon.
Waxaa uu Ahaa Kulan Abaabulan oo aanu La Qaadaney Caruurta ku Dhaqan Xaafadda DAAMI, ku Dhiiri galinta Caruurteena dhaqanka Suuban waa mid loo baahanyahay markasta, Kana Qaybqaado horumarka Caruurteena meelkasta oo ay joogaan.
Waxa mahad gaar ah leh Ilhaan Faleebo iyo dhalinyaradii la socotay oo booqday xaafadda Daami weyna ku mahadsan yihiin.